Ungasarudza sei zvinyorwa pane iyo iPad | IPhone nhau
Sei kusarudza zvinyorwa paPad
Kune vazhinji vashandisi avo Vanochemera mukana wekushandisa mbeva pane iyo iPad, uye wozviona sechimwe chinhu chakakosha kuti ukwanise kufunga nezveiyo Pro Pro seyechokwadi kutsiva palaptop. Zvisinei, izvi hazvisi kuzoitika, nekuti kana chinhu chimwe Apple chave pachena (zvirinani izvozvi) ndechekuti iyo iPad chishandiso chakagadzirirwa kushandiswa neminwe.
Iko kusanganiswa kweminwe yako, iyo Apple Penzura uye keyboard ndizvo zvese zvaunoda kuti uwane zvakanakisa kubva iyo iyo iPad, asi zvinodikanwa kuti iwe uzive maturusi ese ayo anotikweretesa isu. Nhasi tinotsanangura chimwe chakanyanya kukosha kana tichitaura nezve kugadzirwa: sarudza chinyorwa. Kunyangwe iri nemasaini emunwe, Apple Penzura kana keyboard, tinokuratidza maitiro aungaite nekukurumidza uye chengetedza yakawanda nguva.
2 Iine Apple Penzura
Mune chero zvinyorwa zvemavara unogona kufambisa chinongedzo chakakomberedza iyo skrini nekutsvedza zvigunwe zviviri kuyambuka, sekunge yaive trackpad. Iyi nzira yakapusa yekuisa iyo kokorera kwaunoda kuenderera uchinyora kana kusarudza izwi. Kuti uzvisarudze iwe unofanirwa kungobata kamwe chete nezvigunwe zviviri kana iyo sarure iri pairi, ukabata kaviri nezvigunwe zviviri unosarudza chirevo chose (kusvika panotangira) uye kana ukabata katatu nezvigunwe zviviri unosarudza ndima yese.
Iwe unogona zvakare kusarudza izwi nekuirova kaviri nemumwe. Chero zvazvingaitika, wasarudza iro izwi sekusarudza kwaunoita, Kana bhuruu rebhuruu rave pachiratidziri, unogona kuwedzera kana kudzikisa sarudzo uchishandisa «trackpad» chiratidzo, ndiko kuti, nekutsvedza zvigunwe zviviri kuyera skrini. Nesangano iri unogona kutopeta kana iwe ukasvika padanho repamusoro kana repasi.
Iine Apple Penzura
Kana tichida kunyatsojeka tinogona kushandisa Apple Penzura. Nayo tinogona kuisa chituko kwatinoda, asi kana nesuwo tinobata kaviri pane izwi isu tinorisarudza, uye takaita izvi tinogona kushandisa mabara ekusarudza kuti tiwedzere kana kuadzikisa.
Senge iyo yaive komputa yakajairika, tinogona kushandisa Smart Keyboard (chete paPad Pro), uye nenzira dzekukosha tinosarudza zvinyorwa:
Shift + chinongedzo: kusarudza zvinyorwa. Iyo inotora ichave iyo inosarudzira mafambiro esarudzo.
Shift + cmd + chinongedzo: isu tinosarudza iyo tambo yese (nekudzvanya kurudyi), kubva kune iyo cursor kusvika kumagumo egwaro (cursor pasi) kana kutanga kwayo (kosi kumusoro).
Shift + alt + chinongedzo: Sarudzo izwi neshoko (kurudyi kana kuruboshwe) kana ndima yese (kumusoro uye pasi).
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Sei kusarudza zvinyorwa paPad
Isu tinokudzidzisa iwe kufafiza internet neApple Watch
Niantic inodonhedza yekutanga nhoroondo yeHarry Potter Wizards Unite, iyo nyowani Pokémon GO-dhizaini yakawedzera chaiyo mutambo